Indlu entle eCabanzón (eHerrerías) - I-Airbnb
Indlu entle eCabanzón (eHerrerías)
Cabanzón, Cantabria, Spain
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguReyes
Yindlu ekwidolophu yaseCabanzón, yemveli, epholileyo kunye nolwakhiwo lwangoku. Inegumbi lokuhlala elinendawo yomlilo, ikhitshi kunye nendlu yangasese kumgangatho osezantsi kunye namagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo kumgangatho ophezulu.
Inethafa elingaphandle elinokubanakho ukonwabela ii-barbecues, izidlo okanye nanini na. Imoto inokupakishwa emnyango wendlu.
Indlu ifumaneka kwidolophu Cabanzón, ezolileyo yaye uyathandeka idolophu, kufutshane nomda phakathi Cantabria kunye Asturias, it has Soplao Caves 8.5 km kude, ukuba neekhilomitha-13 ukusuka kunxweme Pechón ne-18 km ukusuka San Vicente de la eBarquera.
Kwelinye icala, iikhilomitha ezingama-38 ukusuka ePotes kunye nePicos de Europa National Park kunye neekhilomitha ezingama-22 ukusuka kwindawo yokujonga yaseSanta Catalina ukusuka apho unokubona khona iLa Hermida gorge. I-Nansa River Path kunye ne-Rías Tina Mayor kunye ne-Menor nazo zikufuphi.
Kwidolophu enye, unokutyelela iTorre de Cabanzón, eyayiyinxalenye yenkqubo yokuqiniswa kweenqaba kwiNansa Valley. Ngowe-1992 yabhengezwa njengeSiza soMdla kwezeNkcubeko. Ngokwenene yinqaba enodonga oluncinane, eyahlaziywa ngokulandelelanayo okanye yakhiwa ngokutsha, kukholelwa ukuba ulwakhiwo lwantlandlolo lunokususela kwinkulungwane ye-12. YayiyeyoBukhosi baseRábago.
Ke, enye yeesimboli zale dolophu eyenze ukuba yaziwe ngaphakathi nangaphandle koluntu oluzimeleyo yi-Encinona yodumo. Umthi wom-oki unemilinganiselo emikhulu emangalisa wonke umntu oqala ukuwujonga
Okubaluleke kangako kolu hambo lwelifa lokudlula eCabanzón yiCawe yaseSanta Eulalia de Mérida, ekwisitayile seBaroque kwaye igqame ngokugcina isibingelelo esihle esisenziwe ngenkulungwane ye-18 kunye nomnqamlezo ovela kwi-humilladero.
Ubumelwane apho le ndlu ikhoyo ikulungele ukuhamba nabantwana, yidolophu ezolileyo engenazo nakuphi na ukugcwala kweemoto kunye nokunxibelelana ngokupheleleyo nendalo.
Umbuki zindwendwe ngu- Reyes
Umamkeli-zindwendwe uya kufumaneka nangaliphi na ixesha kuyo nayiphi na imibuzo okanye iimfuno ezinokuvela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cabanzón